किन बदल्नु जरुरी छ सोंच, व्यवहार र कार्यशैली ? — Imandarmedia.com
एउटा भनाई छ । कुनैपनि काममा सफलता मिलेन भने त्यो काम बदल्ने होइन, बरु काम गर्ने तरिका बदल्ने हो ।
अक्सर हामी नयाँ नयाँ काम गरिरहेका हुन्छौं । तर, अपेक्षाकृत सफलता हासिल भइरहेका हुँदैनन् । जस्तो पशुपालन गर्छौं, तर सोचेजस्तो नाफा हुँदैन । पशुपालन छाडेर रेष्टुरेन्टमा लगानी गर्छौं । रेष्टुरेन्टबाट पनि गतिलो आर्जन हुँदैन । यसरी जुन–जुन कामबाट असफलता मिल्छ, त्यसलाई चटक्कै छाडेर अर्को काममा लाग्छौं ।
तर, किन हामी असफल भयौं ? आत्मसमीक्षा गरिदैन । बरु अर्को काम गर्ने हतारो हुन्छ । व्यवसायिक जीवनमा मात्र होइन, निजी जीवनमा पनि हामी यस्तै गल्ती गरिरहेका हुन्छौं । एउटै शैली, एउटै ढंग, एउटै सोंचले जीवनमा खास नयाँपन दिदैन । यस किसिमको जीवनशैली दिक्कलाग्दो हुन्छ । नयाँ विचारहरु फुर्दैन । नयाँ जोश, जाँगर आउँदैन । कुनै काम गर्ने तौर–तरिका मिल्दैन । कुनैपनि कामबाट सफलता मिलिरहेको हुँदैन ।
यस्तो अवस्थामा आफ्नो शैली, ढंग एवं आफैलाई थोरै बदल्नुपर्छ । यसरी आफुलाई बदल्न सकेमा जीवनमा नयाँपन अनुभूत गर्न सकिन्छ । कतिपय काममा सफलता हात लाग्छ । कसरी बदल्ने त आफुलाई ?
हामी कुनै न कुनै उदेश्य लिएर काम गर्छौं । उदेश्य प्राप्तिका लागि जे काम गर्छौ, त्यसमा हाम्रो ढंग नपुगेको हुनसक्छ । प्रयास नपुगेको हुनसक्छ । त्यसैले उदेश्य प्राप्त हुँदैन ।
तर, कहिले काहिँ हामीले अनावश्यक उदेश्य लिएर पनि काम गर्छौं । त्यस्ता उदेश्य, जो पुरा गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो उदेश्यलाई बदल्नुपर्छ । र, त्यो उदेश्य प्राप्तिका लागि सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ ।
हरेकको आ-आफ्नै बानी हुन्छ । त्यही अनुसार व्यवहार गरिन्छ । अतः आफ्नो जीवनमा नयाँपन ल्याउनका लागि व्यवहार पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । आफ्नो काम–कारबाही कसरी गर्ने, आफन्तसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, साथीभाइसँग कसरी सहकार्य गर्ने जस्ता कुरामा आफ्नो पुरानो व्यवहार त्यागेर फरक ढंग अपनाउनुपर्छ ।
सोंच, चिन्तन, कामको शैली बदल्ने कुरा सजिलो छैन । तर, जीवनका कतिपय मोडमा पुगेपछि यस्तो बदलाव आवश्यक हुन्छ । जीवन जब पट्यारलाग्दो हुन्छ, तब आफुलाई बदल्नुपर्छ । यसका लागि सोंच, चिन्तन, काम गर्ने ढंग, शैली बदल्नुपर्छ । यससँगै आफ्नो जीवनशैली बदल्नुपर्छ ।
जीवनशैली भन्नाले आफ्नो उठ्ने, सुत्ने, खाने तालिका बदलौं । आफ्नो दिनचर्यामा पनि नयाँपन दिने प्रयास गरौं ।
तपाईको जीवन खराब अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । संभवत तपाइलाई थाहा छ कि, के कारण यस्तो भइरहेको छ ? खासमा समस्या के हो ? जागिर ? साथीभाई ? आफ्नो खराब बानी ? परिस्थिती ?
समधान खोज्नुअघि तपाई यो टुंगोमा पुग्नुपर्छ कि, समस्या के हो ? जब समस्या थाहा हुन्छ, त्यसको समधान खोज्न सजिलो हुन्छ । हरेक समस्यासँगै त्यसको समधान हुन्छ । हरेक समस्याको हल हुन्छ ।
अब तपाईले आफ्नो सोंच एवं मानसिकता बदल्नुपर्छ कि, हरेक समस्याको समधान खोज्न सकिन्छ ।
परिस्थितीहरु कहिले अनुकुल हुन्छन्, कहिले प्रतिकुल हुन्छन् । जीवनमा यस्ता उतार–चढाव सबैलाई आइपर्छ । सबैले झेलेकै हुन्छ । त्यसेले यस्ता परिस्थितीबाट दुखी हुने होइन । वा भाग्ने होइन । बरु सामाना गर्नुपर्छ । अर्को कुरा हामीले जस्तोसुकै प्रतिकुलतामा पनि हतोत्साही हुनु आवश्यक छैन । परिस्थितीलाई जति जटिल सोचिन्छ, त्यो उत्तिनै जटिल जस्तो लाग्छ । सरल ढंगले सोचियो भने, त्यो सामान्य लाग्छ ।
कहिले काहिँ हामी सानो कुरामा पनि हतोत्साही हुन्छौं । डराउँछौं । कमजोर हुन्छौं । तर, यस्ता प्रतिकुलतासँग डटेर अगाडि बढ्नका लागि आत्माविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
भनिन्छ नि, ‘तपाई स्वयम् आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सत्रु हुनुहुन्छ ।’ जब तपाई कुनै समस्याको घेराबन्दीमा पर्नुहुन्छ, त्यो परिस्थितीको दोष होइन । किनभने परिस्थितीलाई दोष दिएर तपाइले त्यसबाट मुक्ति पाउनुहुन्न । खासमा उक्त परिस्थितीबाट कसरी उम्कनुहुन्छ ? त्यो तपाईको दायित्व हो ।